Maitiro ekudzivirira kurumwa nembug-uye uwane zororo rembuya - Dzidzo Yehutano | Chikunguru 2021
Hutano Dzidzo, Hutano Nharaunda Zvinodhaka Vs. Shamwari Kambani, Iyo Checkout Hutano Dzidzo, Zvipfuwo Dzidzo Yehutano Nharaunda, Kambani Nhau, Wellness Wellness Nharaunda, Wellness Info Info, Nhau Info Info, Hutano Dzidzo Kambani, Nhau Nhau Checkout
Kuru >> Dzidzo Yehutano >> Maitirwo ekuruma nekurumwa kwezhizha
Maitirwo ekuruma nekurumwa kwezhizha
Zuva rezhizha rinowanzoreva yakawanda yenguva yekuzorora inopedzwa kunze-asi zhizha harigaro kuve zuva uye muraraungu, zvinouyawo nekurumwa kwezvipembenene nekurumwa. Nehurombo, mapikniki anonakidza anopunzika kazhinji nenyuchi, masvosve emoto, kana umhutu. Nepo yakawanda yenguva inoruma nekurumwa ingori dambudziko, zvinogona kuva nenjodzi.
Mune vamwe, kurumwa kwe bug kungakonzeresa kukonzeresa kurwisa, kwakaratidzirwa nedzungu, kuvhara huro, kuzvimba, uye / kana kuparadzira kuchenesa muviri, anodaro. Lily Barky , MD, chiremba wekukurumidzira muLos Angeles. Kana iwe ukasangana nechimwe cheizvi zviratidzo, iwe unofanirwa kushanyira imba yekukurumidzira.
Kune kumwe kurumwa kwese, unogona kurapwa kumba-asi zvakakosha kuti uzive zvauri kushanda nazvo.
Kazhinji bug inoruma uye maitiro ekuvarapa
Zvichida iwe unoziva vanowanzo fungidzirwa munharaunda yako, seumhutu kana masvosve matsvuku, asi kana iwe uri kumwe kunhu kutsva, zvakanaka kuti uzive chekutarisira. Pano, dzidza nezvevanoziva vatsoropodzi vezhizha, maitiro ekudzivirira kuti vasakurume, uye maitiro ekurapa sting kana iwe ukatsemurwa.
Chiziviso chebug kuruma
Rudzi rwekuruma Zviratidzo Zvinoda kurapwa here? Kurapa
Nyuchi nemazavi Pakarepo kurwadziwa, kutsvuka uye / kana kuzvimba, kuvaviwa Kwete, kunze kwekunge iwe uine allergiki reaction. Antihistamine makirimu kana yeanogadzikana Benadryl kana jekiseni re epinephrine
Umhutu Diki tsvuku bhuru, kuvaviwa panzvimbo, kuzvimba Kwete Anti-kuvava makirimu kana mafuta ekuzorodza senge aloe vera
Masvosve emoto Kunzwa kupisa, machena machena, kurwadziwa nekukasira, kuvaviwa kunogara kwemazuva akati wandei Kwete, kunze kwekunge iwe uchiratidza zviratidzo zvekusagadzikana Hydrocortisone kirimu
Zvikwekwe Kushatirwa kwakapfava kana kwezvirwere zvinotakurwa nezvikwekwe: fivhiri, kutonhora, kuoma musoro kana kuomarara kwemutsipa, kurwadziwa kwemhasuru kana kwemajoini, kuputika kwakasiyana Kwete, kunze kwekunge iwe uchifungidzira chirwere chinotakurwa nezvikwekwe Kugeza nzvimbo yacho nesipo nemvura
Nhata Diki diki dzvuku dzinorumwa dzinowanikwa mumasumbu, kuvaviwa kana kusuwa, dzinoruma dzakatenderedza hapwa, makumbo, mabvi, uye mapanga eganda. Kwete Anti-kuvava makirimu akafanana Benadryl itch kumira kirimu
Mhungu Kurwadziwa, kuchenesa, kana kumhanyisa panzvimbo iyi, yepepuru kana tsvuku blister blister, fivha kana kutonhora, kurwadziwa kwemhasuru uye kupwanya, kutemwa nemusoro, kuda kurutsa kana kurutsa, kutuka, uye / kana kunetseka kufema Tsvaga zano rekurapa kana iwe uchifungidzira kuti ine uturu hwegandanga Chenesa kuruma nesipo nemvura wozodza mushonga unorwisa mabhakitiriya; chando pack kana jira nyoro rinonyorova rekudzora kurwadziwa nekuzvimba
Chiggers Inoruma mumasumbu, kunyanya kuchenesa, tsvuku, bundu ganda, mukoko-kunge mapundu Kwete Pakarepo geza nesipo nemvura; anti-itch kirimu
Kuisa zvitupa zviri nyore, nyuchi dzine hura uye mavu haana. Dzimwe dzespp dzinowanikwa zvakanyanya dzinosanganisira iyo yellowjacket uye runyanga. Yellowjackets dendere pasi pevhu apo mahoneti anogona kuwanikwa mumapepa-senge matendere akasungirirwa pamiti.
Musiyano mukuru pakati pezvipenga izvi inyuchi dzinongobaya kamwe chete (uye dzinosiya mbambo dzadzo dzakapinza padzakaruma) uye manyosi anogona kuruma kakawanda. Mushure me wasp kana nyuchi inoruma iwe ungango sangana neiyo yemuno kana yeargic reaction.
Kuita kwenzvimbo inosanganisira zviratidzo zvekurwadziwa nekukasira, kutsvuka, kuzvimba panzvimbo yekubaya, uye kuvaviwa kutenderedza nzvimbo yekubaya. Kurapa kwekuita kwenzvimbo kunoitika zvinongoda kutarisirwa kwemaronda sekucheneswa, uye pamwe antihistamine kana anti-itch kirimu kubatsira nekurumwa, kutsvuka uye kuzvimba. Usati warapa, ita chokwadi chekuba robviswa paganda rako dai yaive nyuchi.
Anogadzikana inosanganisira kunetsekana kufema, kutsvuka kunopuka mapundu achipararira kunzvimbo dzinopfuura kubaya, kuzvimba kwechiso nehuro nzvimbo, kushushikana, kupomba nekukurumidza, uye dzungu. Kuti urape kusagadzikana kwehutachiona, unogona kutora Benadryl kana kuwana jekiseni reepinephrine zvichienderana nekuomarara. Kana iwe usina EpiPen pauri panguva yekurwiswa kwemhirizhonga, tsvaga rubatsiro rwekukurumidzira kurapwa.
Kunakidzwa chokwadi: Umhutu hwevakadzi chete hunoruma, uye ivo vanogona kunge vakaoma kudzivisa muzhizha. Umhutu hunoruma kuvava zvakanyanya nekuti kana mosquito saliva ichipinda kuburikidza neganda, muviri wedu unozviziva sechinhu chekune dzimwe nyika chinokonzeresa mhinduro ye histamine inotungamira mukurumwa. Kunyange zvingave zvinotsamwisa, kurumwa neumhutu hakuna njodzi, anodaro Niket sonpal , MD, weNew York Akadzika internist uye anowirirana purofesa kuTouro College. Iwe ungangoona diki tsvuku bundu kubva kuruma, kunhuwa panzvimbo, uye kuzvimba kwakatenderedza nzvimbo. Ingo chengetedza iyo yakakanganiswa nzvimbo yakachena, uye neanti-itch kirimu kana mafuta ekurwisa mabhakitiriya, Dr. Sonapl anodaro. Iwe unogona zvakare kuyedza chizoro chinozorodza senge aloe vera kana diphenhydramine topical cream yekuzorodza humhutu.
RELATED: Maitiro ekudzivirira malaria kana uchienda kunze kwenyika
Masvosve emoto anogona kunge ari matsvuku kana matema uye anowanikwa mukati memadziro echivako kana mamuri evhu nyoro. Asi chenjera kana iwe ukavawana! Kuvhiringidza dendere remasvosve emoto kungangoita kuti zvipembenene zvadzorere muboka rine hasha.
Zviratidzo zvekurumwa kwemasvosve emoto zvinosanganisira:
Machena machena paganda
Itching inogara mazuva akati wandei
Iwe unogona kurapa moto svosve inoruma nemishonga yekumba kana mishonga inobatsira nekurumwa, senge hydrocortisone cream. Vamwe vanhu vane allergical reaction kumoto masvosve.Unofanirwa kuwana rubatsiro rwechiremba kana ukatanga kunzwa dzungu [kana uine] kurwadziwa kusingatsungiririki kana kunetseka kufema, Dr. Sonpal anotsanangura.
Kazhinji inowanikwa kunze kana pedyo nemhuka, zvikwekwe zvakajairika muUnited States. Kurumwa kunogona kutungamira kune akakomba mamiriro kana chishambwe chiri mutakuri we dzakasiyana siyana dzezvirwere zvichienderana nenzvimbo. Aya mamiriro anosanganisira Chirwere cheLyme , yekumaodzanyemba tick-inosangana nekumhanyisa chirwere (STARI), Rocky Mountain yakaonekwa fever (RMSF), ehrlichiosis, uye tularemia. Muzviitiko zvehutachiona hwechirwere cheLyme, zvikwekwe zvinofanirwa kunge zvakasungirirwa maawa makumi matatu nemakumi mana nemasere kana kupfuura isati yatumirwa - ndosaka zvakakosha kurapa chishambwe pakarepo. Ku bvisa chikwekwe , shandisa tweezers uye dhonza mukukwira kumusoro.
Zviratidzo zvekurumwa kwechikwekwe zvinowanzo kuve zvishoma zvinosanganisira nzvimbo tsvuku, kusuruvara, kana kuzvimba kudiki uko kwaive nekwekwe. Zviratidzo zvechirwere chinotakurwa nezvikwekwe zvakanyanya uye zvinogona kusanganisira:
Kutemwa nemusoro kana mutsipa
Tsandanyama kana kurwadza kwemajoini
Kana iwe ukagadzira chero chipi chechiratidzo chechirwere chinotakurwa nezvikwekwe, zvakakosha kutsvaga kurapwa.
RELATED: Nzira yekudzivisa kurumwa nezvikwekwe
Nhata dzinogona kunge riri dambudziko regore rose kune varidzi vezvipfuyo, asi dzinokonzeresa dambudziko rakatonyanya muzhizha sezvo kutenderera kwavo kwekubereka kuchikurumidza mumwedzi inodziya. Uturu hunogona kuitika kana nhata dzichigara mukapeti kana muyadhi, dzimwe nguva kunyangwe isina chipfuwo. Nhata dzinosvetuka-svetuka uye dzinonetsa mhuka dzinovaraidza nevanhu zvakafanana.
Zviratidzo zvekurumwa kunosanganisira:
mhando dzeropa dziripo
Diki, tsvuku inoruma inowanikwa mumasumbu
Ringi diki dzvuku rakatenderedza kuruma
Kurumwa kunoonekwa kazhinji zvakapoteredza hapwa, makumbo, mabvi, uye mapanga eganda
Itchy ganda iro rinogona kuve rinorwadza kana rinorwadza
Anti-itch makirimu akafanana neBenadryl itch yekumisa kirimu inogona kubatsira kudzikamisa chero kuchenesa kwakabatana nekurumwa. Zvakakosha kuti usaruma nhata nekuti izvi zvinowedzera mikana yekurumwa nekutapukira.
Kuti udzivirire hutachiona padyo nekurumwa, Dr. Sonpal anoti suka nzvimbo iyi uye vhara kuruma nemafuta ekurwisa mabhakitiriya.
Mhungu ndidzo dzimwe tsoropodzi dzinowanzoonekwa mumwedzi yezhizha. Kunyange madandemutande mazhinji anowanikwa muU.S. asina chepfu, anogona kuramba achiruma zvinorwadza. Idzo dandemutande mbiri dzine chepfu dzekuchengetera muUnited States ndiko kusarudzika kusviba uye chirikadzi nhema.
Zviratidzo zvekurumwa kwespider zvinosiyana pakati porudzi rwedandemutande, asi zvinogona kusanganisira:
ndeipi yakanakisa yekurwisa kusvotwa mishonga
Marwadzo, kuchenesa, kana kukurumidza panzvimbo iyi
Pepuru kana tsvuku bhuru mhoni panzvimbo iyi
Fivha kana kutonhora
Kusuruvara kwemhasuru uye kupwanya
Mushonga wekuruma chisingaite uturu ichave yekuchenesa nzvimbo yacho nesipo nemvura, kusimudza nzvimbo, uye kushandisa ice pack kana jira rinotonhorera, nyoro kuderedza marwadzo nekuzvimba. Kana kuchenesa kuripo, shandisa kirimu kana kutora antihistamine yakadai saBenadryl. Kana iyo kuruma ikasavandudza uye ikatanga kuzvimba, tsvaga kurapwa.
Chiggers, kana nesainzi, trombiculid mites, vashoma vashoma kubva kumhuri yeArachnid iyo inonakidzwa nekugara munzvimbo dzine huswa. Kazhinji, chigger inoruma inoitika mumuviri wezasi uko zvipfeko zvinorova, senge pamakumbo kana uchipfeka masokisi kana kutenderedza chiuno chebhurugwa.
Zviratidzo zvechigger inoruma zvinosanganisira:
Dzvuku, ganda rinoputika
Chigger inoruma inopora mushure mevhiki kana maviri, asi iwe ungangoda kushandisa anti-itch cream. Kana varume vakarumwa munzvimbo yekugomera, vanogona kuwana zhizha penile syndrome. Izvi zvinokonzeresa kunetseka kuita weti, asi zvakare zvinodzikira mushure memavhiki mashoma.
7 mishonga yekumusha yekurapa bug
Mazhinji bug anoruma anogona kurapwa kumba sezvo kurapwa kuri kunyanya kubatsira kudzikamisa kunhuwa kana kuzvimba. Heano maitiro mashoma ekuyedza:
Ice packs kana chando , Inoshandiswa seye inotonhorera compress, inogona kubatsira kudzikisa kuzvimba kana kuzvimba kweye bug kuluma.
Aloe vera -Kubva kumuti kana kutengwa kuchitoro chemishonga- kunobatsira kudzikamisa uye kudzikisa kuvava nekutsamwa kana uchinge washandiswa pakukurumidzira.
Mudiwa , kunyange isingazorodze ganda, ichabatsira bvisa kuzvimba uye batsira kuchengetedza hutachiona.
Oatmeal ine anti-kupisa zvinhu uye yakaratidzwa kudzikira kutsamwa uye kuchenesa . Gadzira riite pasita nemvura kana kuyedza oatmeal bath yekurwa kuti irwisane nekurumwa nembug.
Vhiniga has anti-kutapukira zvivakwa. Iwe unogona kutsvaira zvimwe pane zvinoruma nekotoni bhora kana iwe uine hanya nezve zvingangoita hutachiona. Asi ramba uchifunga mundangariro izvi zvinogona kupisa.
Calamine mafuta inogona kubatsira kudzikamisa ganda uye nekupa iko kunonoka. Unogona chitenge icho pamusoro pekambani pa pharmacy kana tsvaga DIY recipe online uchishandisa pasoda pasika kugadzira vogadzira vhezheni.
Mafuta akakoshaunokwanisa nyaradza tsikidzi inoruma naizvo. Mafuta emuti wetii uye mafuta eremongrass anogona kubatsira kuchenesa uye kuderedza kuzvimba. Lavender inogona kubvisa marwadzo uye basil yakakosha mafuta inobatsira kudzivirira hutachiona. Uyezve, peppermint uye menthol maoiri nyaradza marwadzo uye unopisa uye uine inorwisa mabhakitiriya zvinhu izvo zvinoderedza njodzi yekutapukirwa, ndosaka mushonga wemazino iri mishonga inozivikanwa yekumba yekuruma bug.
Kune zvese zvipukanana zvinoruma, zvakakosha kuti urambe uchichenesa. Kurumwa netupukanana / kurumwa kunogona kuve kwakanyanya-kutapukirwa, kunyanya nekukweva kwakanyanya kwekunzwa, Dr. Barsky anodaro. Zviratidzo zvekutarisa zvinosanganisira kuwedzera kutsvuka kana kuzvimba kuchipararira kubva pakuruma kwekutanga, kubuda kubva paronda uye / kana fivha.
Kana hutachiona hukaitika, zvakakosha kushanyira mupi wezvehutano sezvo iwe ungangoda mishonga inorwisa mabhakitiriya.
Maitiro ekudzivirira kurumwa nembug
Kune nzira dzinoverengeka dzaunodzivirira kutarisa kwetsikidzi zvese pamwe chete usati waruma kana kubayiwa. David samadi , MD, weSt. Francis Hospital muLong Island, inopa mazano anotevera:
Usati waenda panze, gara wakaisa mushonga unodzinga zvipembenene une 20% kusvika 30% DEET pane rakaratidzwa ganda uye zvipfeko. Izvi zvinofanirwa kudzinga mosquitos uye zvikwekwe pamwe nezvimwe zvipembenene.
Chero ganda rakafumurwa rinofanira kuvharwa kana uchifamba musango kana kuenda kunze husiku. Mashati ane maoko marefu, mabhurugwa, masokisi, uye shangu-dzakavharwa zvigunwe (pasina shangu) zvinogadzira chipingamupinyi pakati peganda rako nembuguru.
Edza kupfeka chena kana beige mbatya sezvo dzinoruma zvipembenene zvinokwezva kune yakajeka mavara.
Dzivisa kupfeka cologne, pefiyumu, kana kuputira bvudzi - umhutu hunofunga kuti uri ruva uye unoda kumhara pauri.
Ukangodzokera mumba, tarisa muviri wako kuti hauna zvikwekwe here kana zviratidzo zvekurumwa nembugurwa; bvisa zvikwekwe nekukasika uye kurapa kurumwa nembugurwa pazvinenge zvakakodzera
Ramba uchifunga, zvakare, kuti zvipembenene zvinoruma zvinowanzo tevera shure kwako kana uchizvivhiringidza kana matendere adzo kana mikoko, Dr. Samadi anodaro. Ukasavanetsa, havazokunetsa.
Kana iwe uine hanya nekurumwa nembuguru paunenge wakarara, edza mambure eumhutu uye shandisa chinogadzirisa mweya sezvo tupukanana twanda tusingadi kutonhora.
Kana iwe ukarumwa muzhizha rino, kunyanya kana iwe uine allergies, tora iwo chaiwo marongero pamitengo yakadzikiswa nawo Kadhi rekuchengetedza reSingleCare .
Chinyorwa cheACE inhibitors: Zvishandiso, zvakajairika zvigadzirwa, uye ruzivo rwekuchengetedza
Izvo zvinokwanisika kubata kushushikana kwezororo pasina kuputa kana kunwa
ndinogona here kutora tylenol mushure mekunwa doro
nzira dzechisikigo dzekudzora kukwirira kweropa nekukurumidza
yakanyanya mwero we melatonin iwe yaunogona kutora
kuronga b kunofanira kutorwa mukati memaawa mangani
ndeupi muyero wakakura we melatonin wevakuru
chantix yakawanda sei isina inishuwarenzi ku walmart